INKONZO ye-OEM-Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
Itshathi yokuHamba kweodolo
Sibonelela ngeemveliso ngobuchule bokusebenza obugqibeleleyo, inqanaba lobuchule eliphambili, iindlela zokuvavanya ngokupheleleyo, umgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu.
Imveliso yetekhnoloji yokwenziwa ngokutsha, ukwenziwa kwenkonzo ekumgangatho ophezulu, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi, kunye nokusombulula iingxaki kubasebenzisi betekhnoloji nasemva kokuthengisa.
Ukuba ujonge i-transformer yesiko, nceda uqhagamshelane nathi!
Ukuze unike umdlalo opheleleyo kwiinzuzo zezibonelelo zamashishini omabini amacala, ngokuhambelana nomgaqo wokuzuza okufanayo, ukuphumelela kunye nophuhliso olufanayo, la macala mabini afikelele kule miqathango ilandelayo kwimveliso ye-OEM:
1. Utshintshiselwano lwempahla yekhredithi yeshishini phakathi kwamaqela amabini kufuneka lube yinyani kwaye lusebenze, kungenjalo ilahleko evela ngenxa yoko iya kuthwalwa liqela elophula umthetho.
2. Iindlela zeNtsebenziswano
1. Iqela A liphathise iQela B ukuba livelise iinguqu kunye nezinye iimveliso ezinegama lenkampani, idilesi kunye nesazisi sohlobo lweParty A. Iqela B liqinisekisa ukuba iimveliso eziveliswayo azinyhashi naliphi na iqela lesithathu amalungelo obunini kushicilelo kunye namalungelo asemthethweni kunye nomdla.
2. Iqela B liqinisekisa ukuba izalathi zeemveliso ezibonelelweyo zihambelana nemigangatho yangoku yemveliso yabathengi kunye neemfuno ezifanelekileyo zemigangatho yesizwe, kunye nokuba iimveliso ezinikezelweyo zihambelana neemfuno ezifanelekileyo zokusingqongileyo.
3. Iimveliso ze-OEM zithengiswa ngokupheleleyo yiParty A. Iqela B alinaxanduva lokuthengisa.Iqela B alisayi kuthengisa iimveliso zeOEM eziphathiswe liQela A kulo naliphi na iqela lesithathu.
4. Emva kokuphelelwa okanye ukupheliswa kwentsebenziswano, iQela B aliyi kuphinda livelise okanye lithengise imveliso ngelogo ye-Party A nangaluphi na uhlobo.
5. Iqela A linelungelo lokuthumela abasebenzi ukuba bajonge izinto ezikrwada, izincedisi, yonke inkqubo yokuvelisa, umgangatho wemveliso, njl njl. yeemveliso ze-OEM.Iqela B liyasebenzisana kwaye lincedisa ngazo zonke iinzame.
3. Indawo, indlela kunye neendleko zokuhanjiswa (ukuhanjiswa)
1. Kugqitywe ngamaqela amabini ngokubonisana.
2. Iindleko zokupakishwa kwemveliso kunye nokwenza iipleyiti ziya kuthethathethwana phakathi kwamaqela amabini.
4. UkuPakisha iMveliso kunye neeMfuno zoKhuselo
1. Iqela A liya kubonelela ngoyilo loyilo lokupakishwa, iibhokisi zemibala, imiyalelo, iilebhile, iipleyiti zamagama, izatifikethi zokuthobela, amakhadi ewaranti, njl. njl. Iqela B liya kuthwala iindleko zokuthenga, ukuvelisa kunye nokuvelisa, kwaye iQela A liyakuqinisekisa kwaye litywine iisampulu.
2. Emva kokuphelelwa okanye ukupheliswa kwentsebenziswano phakathi kwamaqela amabini, iQela B aliyi kuba nelungelo lokusebenzisa okanye ukuvelisa nayiphi na imveliso enophawu lweQela A nangayiphi na indlela.
5. Ulawulo lweBrand
1.Ubunini bophawu lwentengiso olunikezwe liQela A (kuquka ukupakishwa koyilo, imizobo, abalinganiswa baseTshayina, isiNgesi kunye nendibaniselwano yaso, njl. njl.) leloQela A. Iqela B liyakusebenzisa uphawu lokuthengisa ngaphakathi kwendawo egunyaziswe liQela A kwaye alisayi ukudlulisa okanye ukwandisa umda wokusetyenziswa kwayo ngaphandle kogunyaziso.
6. Emva kokuthengisa Inkonzo
1. Emva kokuthengisa kunye nexesha lewaranti liya kuthethathethwana phakathi kwamaqela amabini.
2. Iqela B lizalisekisa ngokungqongqo izibophelelo ezifanelekileyo ezichazwe kuMthetho woMgangatho weMveliso weRiphabhliki yaBantu baseTshayina.Iqela B liyakwenza zonke iinzame zokusombulula iingxaki zembuyekezo kunye notshintshiselwano lweempahla ezibangwe ziingxaki zobulunga zeQela B, kwaye iindleko eziyeleleneyo ziya kuhlawulwa liQela B;Iqela A liya kuba noxanduva lweendleko ezinxulumene nokonakaliswa kweemveliso ezibangelwa kukusetyenziswa ngokungaqhelekanga.